ဧရာဝတီ - ရုပ်/သံ: Dateline Irrawaddy
ဦးကိုကိုလှိုင်.. သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်....
ဦးကိုကိုလှိုင်.. တကယ်ကို တော်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီိလိုမျိုး လူတော်ရှိနေတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်.. လူမှန် နေရာမှန်မှာ ရှိနေတာပါ..မေးတဲ့သူကတော့ ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ ပေါ့...ဒီနေရာမှာ့ မာနထောင်လွှားမှုကင်းစွာ..ဖြူစင်သောစိတ်ထား..ပညာရှိပီသမှုကို ဦးကိုကိုလှိုင်ဘက်က ပြသပေးသွားတာပါ...
Anonymous comment is right
မေးခွန်း မေးတဲ့ လူကလဲ တော်တယ်။ ဖြေတဲ့လူကလဲ အပြောကောင်းပြီး လိမ်မာပါးနပ်တယ်။ သို.သော် လောလောဆယ်တော့ လေထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ် လက်တွေ. အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ အခါ ဦးဆောင် ပါဝင်သူတွေ အလုပ်လုပ်ကြသူတွေ က ဘယ်လောက်အထိ မိမိကိုယ်ကျိုးမပါ ပြည်သူ.မျက်နှာကိုပဲ တကယ်ကြည့်ပြီး ပြတ်သားပီပြင် မှန်ကန်စွာ လုပ်ရဲကြ မှာလဲ... စေါင့်ကြည့်ရအုံးမှာပါ။